Na-enye Nri Nri kọmpat, Nri Pellet kọmpat, Nri Production Si China na-emeputa
Nkọwa:Kọlụm nri nri,Pellet Feed kọmpat,Decoiler Leveler Feeder,Usoro nri nri,Mkpịsị Nri Mgbapụta Ahịrị,3 na 1 Nc Servo Feeder
Home > Ngwaahịa > Decoiler Straightener Feeder > Mkpumkpu Nri siri ike Ngw’oru
Ngwaahịa nke Mkpumkpu Nri siri ike Ngw’oru , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Kọlụm nri nri , Pellet Feed kọmpat suppliers / factory, wholesale high-quality products of Decoiler Leveler Feeder R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Decoiler Straightener na Servo Feeder Line  Kpọtụrụ ugbu a
Onye na-enye ihe ndozi maka ndozi akụkụ maka ngwaike akụkụ stampụ  Kpọtụrụ ugbu a
Onyinye ekpughere onye na-enye ihe  Kpọtụrụ ugbu a
Nweta Nchekwa onwe Nweta  Kpọtụrụ ugbu a
Loop Control Straightener nri  Kpọtụrụ ugbu a
Nlekọta eriri-nri 3 na 1  Kpọtụrụ ugbu a
Decoiler onye na-enye nri na-eji ihe ọkụ ọkụ maka ihe nrụgide dị elu  Kpọtụrụ ugbu a
Igwe eji eme ihe ndozi maka ndozi akụkụ azu azu  Kpọtụrụ ugbu a
Kọmpat Nri Line maka akụkụ akụkụ akpa stamping  Kpọtụrụ ugbu a
Decoiler Straightener Feeder 3 Na 1 igwe  Kpọtụrụ ugbu a
Onye na-eri nri akpaghị aka na-akpaghị aka  Kpọtụrụ ugbu a
Ngwunye nri maka eriri akpaaka  Kpọtụrụ ugbu a
Kọmpụta Nri Inye Ha nri  Kpọtụrụ ugbu a
Usoro Nhazi kọlụm  Kpọtụrụ ugbu a
Gburugburu nri Line  Kpọtụrụ ugbu a
Ike ike ígwè pịa nri akara  Kpọtụrụ ugbu a
Automatic kọmpat Nri akara  Kpọtụrụ ugbu a
Ngwaọrụ igwe nrụnye igwe pịa Nc Servo Roll Feeder  Kpọtụrụ ugbu a
Kọmpatetị Decoiler na Feeder Straighteners Press Feed Systems  Kpọtụrụ ugbu a
Pịa nri Stamping Line  Kpọtụrụ ugbu a
Nri SmartSaver Coil Feed Systems maka ihe eji eme ihe di elu ka eme ya iji mee ka ndi mmadu steeti siri ike nke di elu karia 400Mpa. Ha na-enye ntụkwasị obi nke usoro ọbụna maka ihe ndị kachasị achọ. Ha na-optimally ruru eru maka imewe nke bughi...
Decoiler Straightener na Servo Feeder Line
Nkwakọ ngwaahịa: Akpa
DEC OILER STRAIGH TENER P SERR V SER VO FEEDER L NA E Decoiler Straightener na Servo Feeder Line chekwara Line na -ejikọta onye na-eri nri / onye na-akwụ ọtọ na ihe ndozi ọkụ. A na-emepe oghere a na-amị amị n'okpuru oghere, na -ebelata oghere...
Onye na-enye ihe ndozi maka ndozi akụkụ maka ngwaike akụkụ stampụ
DECO ILER STRAIGHTENER FEEDER maka HARDWARE PARTS STAMPING Onye na-enye ihe ndozi maka ndozi maka ngwa ngwaike ịzọ ọzo chekwara na- ejikọ onye na-eri nri / onye ji ihe ndozi rụọ ya. A na-emepe oghere a na-amị amị n'okpuru oghere, na -ebelata...
Onyinye ekpughere onye na-enye ihe
AUTO UNC OILER LEV ELER FEEDER Nchekwa onwe onye na-eji igwefoto chekwaa ihe eji etinye ihe eji etinye ihe eji edozi ya. A na-emepe oghere a na-amị amị n'okpuru oghere, na -ebelata oghere mbara ala n'ụzọ dị mkpa ma e jiri ya tụnyere loops...
Nweta Nchekwa onwe Nweta
AUTO PRE SS FEEDER LINE Nchekwa onwe nri iji chekwaa nri nri, na-ejizi ihe eji edozi ya. A na-emepe oghere a na-amị amị n'okpuru oghere, na -ebelata oghere mbara ala n'ụzọ dị mkpa ma e jiri ya tụnyere loops nkịtị. Anyị na-enye ọtụtụ atụmatụ...
Loop Control Straightener nri
LOOP CO NTROL STRA M GHTENER FEEDER Loop Control Straightener feeder feeder na -ejikọta onye na-eri nri / onye na-agbatị onwe ya na onye na-achọ mma. A na-emepe oghere a na-amị amị n'okpuru oghere, na -ebelata oghere mbara ala n'ụzọ dị mkpa...
Nlekọta eriri-nri 3 na 1
COIL STR AIGHTENER FEEDER 3 NA 1 Coil Straightener-Feeder 3 Na 1 nchekwa nchekwa oghere na-ejikọta onye na-eri nri / onye na-akwụ ọtọ na onye ndozi ọkụ. A na-emepe oghere a na-amị amị n'okpuru oghere, na -ebelata oghere mbara ala n'ụzọ dị...
Decoiler onye na-enye nri na-eji ihe ọkụ ọkụ maka ihe nrụgide dị elu
Deco ILER feeder MAC HINE n'ihi na elu IRI Zaion IHE Ihe ndozi ndozi nke ndozi ndozi nke ihe ndozi nnochita nke elu bu ihe eji edozi ya. A na-emepe oghere a na-amị amị n'okpuru oghere, na -ebelata oghere mbara ala n'ụzọ dị mkpa ma e jiri...
Igwe eji eme ihe ndozi maka ndozi akụkụ azu azu
DEC OILER FEEDER MACHI NE MAKA AU KA ANA NA EGO Decoiler feeder igwe akpaaka akụkụ zọ s ijeụkwụ azọpụta imewe agwakọta a feeder / straightener na a kwadoro decoiler. A na-emepe oghere a na-amị amị n'okpuru oghere, na -ebelata oghere mbara ala...
Kọmpat Nri Line maka akụkụ akụkụ akpa stamping
AKW FEKWỌ FE FE EDER Kọmpụta Nri kọmpụta maka akụkụ akpaaka na- echekwa oghere nchekwa na-ejikọta onye na-eri nri / onye na-akwụ ọtọ na ihe ndozi ọkụ. A na-emepe oghere a na-amị amị n'okpuru oghere, na -ebelata oghere mbara ala n'ụzọ dị mkpa...
Decoiler Straightener Feeder 3 Na 1 igwe
DECO ILER STRA IGHTENER FEEDER MACHINE 3 NA 1 Decoiler Straightener Feeder 3 Na 1 igwe sara mbara ịchekwa igwe na-ejikọ onye na-eri nri / onye na-akwụ ọtọ na ihe eji achọ mma. A na-emepe oghere a na-amị amị n'okpuru oghere, na -ebelata oghere...
Onye na-eri nri akpaghị aka na-akpaghị aka
AUTOMATIC DEC OILER STRAIG HTENER FEEDER Akpa nri akpati idobere akpukpo akpukpo eji akpoo akpacha akpacha akpacha akpacha akpacha akpacha akpacha akpacha akpacha akpacha akpacha akpacha akpacha akpacha akpacha onyunye eji akpado ihe. A na-emepe...
Ngwunye nri maka eriri akpaaka
COIL F EEDING LI NE MAKA INUTO STAMPING Usoro a na - enye ihe eji edobe ahihia na - ejikọtara onye na - azụ ya na onye na - ere ọkụ. A na-emepe oghere a na-amị amị n'okpuru oghere, na -ebelata oghere mbara ala n'ụzọ dị mkpa ma e jiri ya...
Kọmpụta Nri Inye Ha nri
Ihe nchekwa nchekwa oghere a na –eme ka ihe ngbado agbakwunyere igwe eji etinye ihe eji edozi ya. A na-emepe oghere a na-amị amị n'okpuru oghere, na -ebelata oghere mbara ala n'ụzọ dị mkpa ma e jiri ya tụnyere loops nkịtị. Anyị na-enye ọtụtụ...
Usoro Nhazi kọlụm
Ezubere usoro nri nri kọlụm iji kpoo ngwaahịa mkpuchi na mpaghara iji chekwaa oghere. Mkpakọ eriri igwe na-ejikọtara igwe eji etinye igwe eji etinye ya, servo na-achịkwa elektrik / onye na-enye ya nri na ụgbọ ala na-ebu ihe na-ebudata ya. Ikwu...
Gburugburu nri Line achoghi akpu na olulu n'ihi na edobere eriri igwe n’elu okwado ya na uzo inye ya nri . Mkpịsị kọlụm nwere ọtụtụ arụmọrụ dị ka ahịrị ndị na-arụkarị ọrụ mana enweghị ohere ala na, oge ụfọdụ, na-arụ ọrụ dị mfe. Ọbụlagodi na...
Ike ike ígwè pịa nri akara
Isi ike nwere ikike sọlfụ dị elu chọrọ nlekọta pụrụ iche na usoro njikwa ihe mkpuchi . Nchedo, ogologo ndụ na ergonomics na-adị mkpa karịa inye nri nri. Agbakwunyere na, igwe eji agha agha kwesịrị iguzogide ike kachasị ike na agha mmiri. Igwe a na...
Automatic kọmpat Nri akara
Otu ahịrị nri na akpaghị aka bụ nke ngalaba abụọ maka ya . Igwe igwe abuo a dabere na ebe a na-ekekọta ikuku. A na - ejikọ ọnụ ngwa nri na - ejikọ ọnụ ya na igwe okwu wee nwee ike ịdabere na mpempe akwụkwọ ahụ na - agbanye igwe na - aga n'ihu...
Ngwaọrụ igwe nrụnye igwe pịa Nc Servo Roll Feeder
Ngwaahịa anyị na- aghuta usoro inye nri na kọmpụta zuru ezu yana kọmpụta kọmpụta, maka inyeju coil ihe gaa na igwe okwu. N’arịrịọ gị, anyị dị njikere imere gị atụmatụ, nnyefe na ntinye nke eriri nri coil zuru ezu . N'iji igwe ihe igwe ogwu igwe...
Kọmpatetị Decoiler na Feeder Straighteners Press Feed Systems
Kọmpatetị Decoiler na Feeder Straightener Press F eed Systems na- enye ndị ahịa ngwaahịa ngwaahịa zuru oke maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwa niile dị na mpempe akwụkwọ metal stamping na metal. Iji kọmpụta Decoiler na Feeder Straightener Press F...
Line Press Stamping Line na- enye ndị ahịa ọtụtụ usoro ahaziri aha maka inyeju ihe igwe ihe n'ime igwe igwe eji ekwu okwu, nke na –ekwu ihe niile enwere ike. Ihe dị iche iche nke ngwaahịa na-aghọrọ mpịakọta na-ewe ihe ruru 1800 mm ruo ihe dị ka...
China Mkpumkpu Nri siri ike Ngw’oru Ngwa
Steels siri ike nke nwere nnukwu tensile dị elu chọrọ nlekọta pụrụ iche na Usoro Njikwa . Nchedo, ogologo ndụ na ergonomics na-adị mkpa karịa inye nri nri. Agbakwunyere na, igwe eji agha agha kwesịrị iguzogide ike kachasị ike na agha mmiri.
Ezubere nri maka kọmpụta maka ike dị elu ka emebere steels dị elu na-enwe ike dị elu karịa 400Mpa. Ha na-enye ntụkwasị obi nke usoro ọbụna maka ihe ndị kachasị achọ. Ha dị mma maka imepụta akụkụ akụkụ yana nhazi nke ihe dị ike, ọbụlagodi ogo dị larịị dị warara. Na anyị kọmpat eriri igwe usoro ị nwere ike hazie eriri igwe ihe obosara si 400mm ka 1800mm, eriri igwe ọkpụrụkpụ site 0.6-9.0mm, eriri igwe arọ ruo 25000kgs.
Na-abụkarị ụgbọ ala Coil, decoiler straightener NC servo feeder 3 na 1 njikọ, eriri dị mkpụmkpụ & chekwaa ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Kọlụm nri nri Pellet Feed kọmpat Decoiler Leveler Feeder Usoro nri nri Mkpịsị Nri Mgbapụta Ahịrị 3 na 1 Nc Servo Feeder Kọlụm nri nri 3 n’ime 1 Automatic kọlụm nri nri